Shaqaalaha Dowladda Federalka ah oo la kala fasaxay Coronavirus aawgiis (Doc's) - Awdinle Online
April 09, 2020 (Awdinle Online) – Dowladda Federaalka ayaa si buuxda hakad u gelisay dhamaan howl maalmeedka shaqaalaha iyadoo tix-gelineysa bad qabka shaqaalaha dowladda Federaalka iyo dhammaan bad qabka ummadda Soomaaliyeed.
Wasaaradda Shaqadda ayaa Warqadda ay soo saartey lagu sheegay in ilaa amar danbe hakad la geliyay howl maalmeedka shaqaalaha dowladda sababa la xiriira cudurka COVID-19.
Sidoo kale waxaa lagu wargeliyay in dhammaan hay’adaha Dowladda iyo shaqaalaha yareeyaan isu imaatinka ilaa amar danbe isla markaana waxaa lagu amray shaqaalaha in aay guryahooda ka shaqeeyaaan.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa lagu arkay wax u eg ama muujinaya astaamaha cudurka coronavirus, taasoo keentay in la geliyo karantiil inta laga ogaanayo hadii uu haleeley COVID-19 iyo in kale.
Halka Hoose ka akhriso warqadda amarka Dowladda Federaalka
Previous articleMaamulka Gobolka Gedo oo dadweynaha uga digey Goobaha la isugu yimaado
Next articleMaamulka Degamadda Baydhabo oo soo saaray amaro looga hortagayo faafidda Xanuunka COVID-19